နန္ဒပုရီပြည်နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(နွန်ထဘူရီပြည်နယ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
(left-to-right, top-to-bottom) Leaning Chedi of Wat Paramaiyikawat, Wat Chaloem Phra Kiat Worawihan, Wat Ku, Old Provincial Hall of Nonthaburi, Impact, Mueang Thong Thani, A train of MRT Purple Line
ထိုင်းမြေပုံမီးမောင်းထိုးပြ Nonthaburi Province
ကိုဩဒိနိတ်: 13°51′45″N 100°30′52″E﻿ / ﻿13.86250°N 100.51444°E﻿ / 13.86250; 100.51444ကိုဩဒိနိတ်: 13°51′45″N 100°30′52″E﻿ / ﻿13.86250°N 100.51444°E﻿ / 13.86250; 100.51444
၆၂၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၄၀ စတုရန်းမိုင်)
အဆင့် ၇၅ တွင်ရှိ
၂,၀၀၃.၇/km၂ (၅၁၉၀/sq mi)
• သိပ်သည်းမှု အဆင့်
နန္ဒပုရီ (ထိုင်းအသံထွက်: နွန်ထဘူရီ၊ ထိုင်း: นนทบุรี၊ အသံထွက် [nōn.tʰáʔ.bū.rīː]) ကိုဗဟိုတစ်ခုဖြစ်သည်ပြည်နယ်၏ (ချမ်ဝတ်) ထိုင်းနိုင်ငံကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်၊ ဖေါ်ကျော်ဝေါ်စမုပကား၊ နန္ဒပုရီပြည်နည်၊ ဖေါ်ကျော်ဝေါ်စမုဆာခွန်း၊ နှင့် ဖေါ်ကျော်ဝေါ်နခွန်းနာယို့ ဗုဒ္ဓဘာသာခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် ၂၄၈၉ (၁၉၄၆) ထူထောင်အက်ဥပဒေ၊ အရာ ၁၉၄၆ခုနှစ် မေလ ၉ရက်နေ့တွင်အင်အားသုံးသို့ကြွတော်မူသည်။
အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်များသည်မြောက်ဘက်မှနာရီလက်မဲ့ ( နခွန်းစီအယုဒီဘုရား )၊ ပထုံထာနီး၊ ဘန်ကောက် နှင့် နခွန်းပထုံများ ဖြစ်သည်။ နန္ဒပုရီသည်ဘန်ကောက်ပြီးလျှင်လူဦးရေထူထပ်သောပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ဘန်ခွမ်းဗဟိုအကျဉ်းထောင်သည်ပြည်နယ်အတွင်းတွင်ရှိသည်။
နန္ဒပုရီသည်ဘန်ကောက်အနောက်မြောက်ဘက် ကျောက်ဖယားမြစ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါပြည်နယ်သည်သာကြီးမြတ်ဘန်ကောက်မြို့ပြဧရိယာ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသအများစုတွင်မြို့ပြ  ကဲ့သို့မြို့ပြအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးပြည်နယ်နှစ်ခုအကြားရှိနယ်နိမိတ်ကိုသိရှိနိုင်ရန်နီးပါးရှိသည်။
နန္ဒပုရီသည် ၁၆ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခင်ကခွမ်းဇျေးအမည်ရှိသောရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ရွှေရဲတိုက်ဘုရင်လက်ထက်တွင်ကျောက်ဖယားစီးဆင်းမှုအတွက်ဖြတ်လမ်းတစ်ခုဖန်တီးရန်တူးမြောင်းတူးခဲ့သည်။ မြစ်၏စီးဆင်းမှုကိုတူးမြောင်းအသစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်မြစ်ကြမ်းပြင်ဖြစ်နေသည်။ ၁၆၆၅ခုနှစ်တွင်ဘုရင်ကနာရိုင်းဟာတိုတောင်းမြစ်သင်တန်းရန်သူများကိုမြို့တော်အယုဒ္ဓယဖို့ပိုမိုလွယ်ကူလမ်းကြောင်းပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်အဖြစ်တစ်ခံတပ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ထိုမြို့ကိုရဲတိုက်အနီးသို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။
၁၉၄၃ မှ ၁၉၄၆ အထိပြည်နယ်သည်ဘန်ကောက်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ပြည်နယ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည်ရိုးရာမြေထည်ပစ္စည်းများဖြစ်သောရိုးရာနန္ဒပုရီထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်ပန်းပွင့်နှင့်သစ်ပင်သည် အဝါရောင်လျှံပင်နွန်စီ ဖြစ်သည်။
စီရင်စု၏ဆောင်ပုဒ်မှာကရမ်းတော်ဝင်အိမ်ကြီး၊ ကျော်ကြားသောဘုရင်ပန်းခြံ၊ ကော့ကရစ်အိုးခွက်၊ ရှေးဟောင်းဘုရားစေတီကျောင်းတော်များ၊ အရသာရှိသောဒရီယန်များနှင့်လှပသောအစိုးရရုံးခန်း။ တော်ဝင်အိမ်တော်မင်းသားဝဇိရာလင်္ကရဏ၏ယခင်နေရာဖြစ်သောနန္ဒပုရီခရိုင်ရှိ နန္ဒပုရီဘုရားစေတီ ကိုရည်ညွှန်းသည်။ တော်ဝင်မင်းသမီးဥယျာဉ် ဘုရင်ပန်းခြံသည်ပါ့ကရစ်ခရိုင်အတွင်းရှိမင်းသမီးသိရီနဂရီန္ဒြာ၏ရုပ်ထုနှင့်အတူဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံကိုပြည်ထဲရေး၀ န်ကြီးဌာနမှအလှပဆုံးသောအဆောက်အဦး အဖြစ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပြည်နယ်တွင်ခြောက်ဦးခရိုင်သို့ကွဲပြား ကုန်းတွင်းပိုင်းအဆိုပါခရိုင်နောက်ထပ် ၅၂ ခရိုင်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်နှင့်၄၃၃ ကျေးရွာပေါင်းရှိသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်တွင်  နန္ဒပုရီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ PAOနှင့်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစည်ပင်သာယာဒေသ ၂၁ ခုရှိသည်။ မြို့တော်နန္ဒပုရီနှင့်ပါ့ကရစ်တို့သည်မြို့ အဆင့်အတန်းရှိသည်။ နောက်ထပ် ၁၀မြို့ အဆင့်နှင့်ခရိုင်ခွဲ ၁၀ ခုရှိသည်။ 
၁ နန္ဒပုရီမြို့  ၂ ပက်ကတ် 
စဉ် မြို့မြူနီစီပယ် ၅ ဘန်မဲနန် 
၁ Bang Si Mueang  ၆ Bang Rak Pattana 
၂ Bang Kruai  ၇ Phimon Rat 
၃ Bang Bua Thong  ၈ Bang Khu Rat 
၄ စိုင်းမမ  ၉ ဘန်ကရန် 
စဉ် Subdistrict mun ။
၁ Sao Thong Hin ၆ Ban Bang Muang၊
၂ Bang Len ၇ Bang Yai
၃ Bang Si Thong ၈ Bang Muang
၄ Plai Bang ၉ စိုင်းနိုင်း
၅ Sala Klang ၁၀ Bang Phlap
စည်ပင်သာယာမဟုတ်သောဒေသများအား SAOအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၂၃မှအုပ်ချုပ်သည်။
နန္ဒပုရီပြည်နယ်သည်တိုင်းပြည်၏ အကောင်းဆုံးတာရှည်ခံစိုက်ပျိုးမှုကြောင့်လူသိများသည်။ ဒူရင်းယန်သည်ဤပြည်နယ်တွင်လူသိများသောအသီးနှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ရှိခဲ့သည်။  ဒီအသီးကိုဒူရင်းနွန်လို့ခေါ်တယ်၊ ဆိုလိုတာကနန္ဒပုရီပြည်နယ်ကဒူရင်းသီးကိုဆိုလိုတယ်။  ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးဒူရင်းသီးအဖြစ်လည်းလူသိများသည်။ ကန်၊ ယောင်၊ ကမ်ပန်၊ သောင်းယနှင့်အထွေထွေဖြစ်သော နန္ဒပုရီ ဒူရင်းအုပ်စု ၆ ခုရှိသည်။ ဒူရင်းယန်ခြံအများစုသည်ကျောက်ဖယားကဲ့သို့မြစ်များအနီးတွင်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြစ်၏ဘေးတွင်ရှိသောမြေသည်စိုက်ပျိုးရန်ကောင်းမွန်သော်လည်းဒူးရှန်းပင်များအတွက်လည်းကောင်းသည်။ ရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများကြောင့်ဒူရီယန်ခြံများစွာပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဒူရင်းနွန်၏ဈေးနှုန်းသည်၎င်း၏အုပ်စုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကရန်သည်ဈေးအကြီးဆုံးဘတ်တစ်သောင်းမှဘတ် ၂၀၀၀၀ အထိ သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀၀ ခန့်မှ စတင်၍ တစ်ဒူရီယန်တစ်စီးအတွက်ဖြစ်သည်။ ကမ်ယောင်ကိုယ်တိုင်ကိုသာမန်ဈေးကွက်များ၌ရှာရန်မလွယ်ကူပါ။ ဈေးကြီးရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာရှားပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် နန္ဒပုရီရှိဒူရင်းနွန်အပင်အားလုံးနီးပါးကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီးသစ်ပင်အနည်းငယ်သာစိုက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လူနေအိမ်areasရိယာများစိုက်ပျိုးရေးဧoရိယာသို့တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ထားသောနန္ဒပုရီ၏အဓိကဆေးရုံမှာဖလက်နန်ကလောင်ဆေးရုံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိုင်းနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးစိတ်ရောဂါဆေးရုံ စီထန်းယားဆေးရုံ၏တည်နေရာလည်းဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေး ပညာရေး အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေ
၁၀ ၃ ၃၄ ၃
အိမ်ရာ မိသားစု သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပါဝင်မှု
၆၁ ၃၀ ၁ ၇၃
ပြည်နယ်နန္ဒပုရီသည် ထိုင်း၂၀၁၇၏ ၀.၆၇၈၈ တန်ဖိုးသည်မြင့်မားပြီးအဆင့် ၄ တွင်ရှိသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ ထိုင်းနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) သည်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု ညွှန်းကိန်းထိုင်းကို အသုံးပြု၍ လူ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကိုဒေသအဆင့်တွင်ခြေရာခံခဲ့သည်။ အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ်အဖွဲ့ (NESDB) ၂၀၁၇ကတည်းကဒီတာဝန်လွှဲပြောင်းယူထားပါတယ်
၁ - ၁၅ "မြင့်"
၁၆ - ၃၀ "အတန်ငယ်မြင့်မားသော"
၃၁ - ၄၅ "ပျှမ်းမျှ"
၄၅ - 60 "အတန်ငယ်နိမ့်"
၆၁ - ၇၇ "အနိမ့်"
ပြည်နယ်များနှင့် HAI 2017 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောမြေပုံ
ထိုင်းအစိုးရမှအစီရင်ခံစာများအချက်အလက်များသည်မူပိုင်ခွင့်မရရှိနိုင်ပါ ပြည်သူ့ဒိုမိန်း၊ မူပိုင်အက်ဥပဒေ ၂၅၃၇ ၁၉၉၄၊ အပိုင်း ၇
↑ "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ" (28 September 2019). Royal Thai Government Gazette 136 (Special 242 Ngor).
↑ Advancing Human Development through the ASEAN Community, Thailand Human Development Report 2014, table 0:Basic Data (PDF) (အစီရင်ခံစာ)။ United Nations Development Programme (UNDP) Thailand။ pp. 134–135။ ISBN 978-974-680-368-7။ 17 January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး, Data has been supplied by Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, at Wayback Machine. [လင့်ခ်သေ]
↑ รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ.2561 (in Thai) (31 December 2018)။
↑ "นนทบุรี จูงมือเพื่อนสาว เที่ยวใกล้กรุงเทพ"။
↑ ပြည်နယ်အလိုက်ဒေသခံအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအရေအတွက်။ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (DLA) (၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉)။ “23 Nonthaburi: 1 PAO,2City mun.,9Town mun., 10 Subdistrict mun., 23 SAO.”
↑ ပြည်နယ်အလိုက်ဒေသခံအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအရေအတွက်။ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (DLA) (၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉)။ “23 Nonthaburi: 1 PAO,2City mun.,9Town mun., 10 Subdistrict mun., 23 SAO.”
↑ "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘" (24 September 1995). Royal Thai Government Gazette 112 (40 Kor): 29-32.
↑ "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๓" (10 February 2000). Royal Thai Government Gazette 117 (10 Kor): 25-28.
↑ "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบาบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางแม่นาง" (20 March 2020). Royal Thai Government Gazette 137 (Special 66 Ngor).
↑ "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง" (23 February 2006). Royal Thai Government Gazette 123 (Special Section 29 Ngor).
↑ "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา" (25 October 2019). Royal Thai Government Gazette 136 (Special 265 Ngor).
↑ "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. ๒๕๔๕" (16 December 2002). Royal Thai Government Gazette 119 (122 Kor).
↑ "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองพิมลราช" (4 March 2014). Royal Thai Government Gazette 131 (Special 41 Ngor).
↑ "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๔๘๐" (14 March 1937). Royal Thai Government Gazette 54.
↑ "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด" (6 February 2019). Royal Thai Government Gazette 136 (Special 33 Ngor).
↑ "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองไทรม้า" (29 July 2020). Royal Thai Government Gazette 137 (Special 172 Ngor).
↑ "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางกร่าง" (4 June 2020). Royal Thai Government Gazette 137 (Special 132 Ngor).
↑ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဈေးအကြီးဆုံးဒူရင်းယန်၊ နွန်ထဘူရီထိုင်း။
↑  สำนักบรรณสารสนเทส มสธ. ทุเรียนนนท์ ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (၉ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၅ ရက်တွင်ဝင်ရောက်)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နန္ဒပုရီပြည်နယ်&oldid=642309" မှ ရယူရန်
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော သစ်ပင်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။